That's so good, right?: Late Night Workout
အလန်းဇယားပဲ…ဟဲဟဲ။ ကျွန်တော် ကျော်ကျော်နဲ့ မင်းသူတို့ရဲ့ Gym မှာ သွားလေ့ကျင့်ကစားနေတာ နှစ်လလောက်တော့ရှိပြီဗျ။ လေ့ကျင့်မှုစနစ် မှန်ကန်တာ၊ ကစားပုံမှားယွင်းမှုနည်းတာတွေကြောင့် ရလာတဲ့ ရလာဒ်က ကျွန်တော့်အတွက် အားရစရာ အလန်း ဇယားပေါ့။ ကျော်ကျော်နဲ့ မင်းသူတို့ကလည်း ကျေနပ်ဝမ်းသာနေကြတယ်ဆိုတာ လောလောလတ်လတ် အ၀တ်လဲခန်းက ထွက်လာတဲ့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်နေကြတဲ့ သူတို့မျက်လုံးတွေက အဖြေပေးနေကြတယ်လေ။
ကျွတ်…. .နည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲ ခုတုတုဖြစ်တာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကိုဘယ်သူက ပိုင်တာမှတ်လို့ သို့မဟုတ် အဲ့သည်လိုအကြည့်ခံ ရချိန်တွေဆို ဘာလဲ ဘာကြောင့်ကြည့်တာလဲ နှစ်မျိုးနှစ်မည် သို့လောသို့လောပေါ့ဗျာ။ ကျော်ကျော်နှင့် မင်းသူကြည့်ရတာ အတွဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိနေတယ်ဗျ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ သူတို့စုံတွဲဖြစ်နေလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် သက်ရောက်မှုတော့ သိပ်မရှိပါဘူးလေ အေးဆေး။ နည်းနည်းတော့ ပြောရကြပ်တဲ့ စုံတွဲပဲ….. နှစ်ယောက်လုံး ကြည့်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်၊ ချောမောတဲ့ မျက်နှာပြင်ကိုယ်စီနဲ့။ ကျော်ကျော့်ကိုယ်ခန္ဓာက ဂရိကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေလို၊ ပြီးတော့ မင်းသူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ သွယ်သယောင်နဲ့ တော်တော် အချိုးအဆစ် လှတယ်။
ကုမ္ပဏီမှာ တစ်နေကုန် အလုပ်လုပ်နေရတာ ဒီနေ့ညနေခင်းထိတော့ အေးဆေးလုပ်နေလိုက်တာနဲ့ gym ကိုရောက်တော့ ပိတ်ကာနီး နေပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာမရှိ ကစားပါတဲ့ ကျော်ကျော်ကပြောပါတယ်။ gym ပိတ်သွားပေမယ့် ကျွန်တော်ကစားနေကျ လေ့ကျင့်ခန်း အတွဲအစပ်တွေကို ဖြေးဖြေးကစားတာပေါ့လေ။ မင်းသူကတော့ မလှမ်းမကမ်းက စားပွဲမှာ စာရွက်စာတမ်းတွေနှင့် အလုပ်လုပ်နေတယ်။ barbell ကိုယူပြီး အလေးထည့်နေစဉ်မှာတော့ ကျော်ကျော်က သတိထားမိပြီး ဆက်လုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်စဉ်သဘာဝကို ပြောပြတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို လာစကားပြောတော့ အပေါ်ပိုင်းအင်္ကျီကို ချွတ်ထားတာ။ ၀ံ့ဝံ့ထွားထွား ရင်အုပ်ကြီးတွေက ကျယ်ပျံ့တဲ့ ပခုံးနှင့် အံကိုက်ဖြစ် သလို အတုံးလိုက်ပေါ်နေတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကလည်း ကျွန်တော့်ကို အားကျစိတ်ဝင်မိစေတာတော့အမှန်ပါပဲ။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး အမွှေးအမျှင်မရှိဘူး။ ပြည်တွင်း ကာယဗလပြိုင်ပွဲတွေ တော်တော်များများ သူပြိုင်ဖြစ်နေတော့ ရိတ်ပယ်ထားရမှန်း ကျွန်တော်သိတာ ပေါ့ဗျ။
ရင်အုပ်အတွက် ပုံမှန်လုပ်နေကြ bench press ကိုတွန်းနေတော့ ကျော်ကျော်က ဒီတစ်ကျော့ပြီးရင် အနောက်ဖက်အခန်းထဲက ခုံစောင်းနဲ့ bench အသစ်တစ်မျိုးလုပ်ကြည့်ပါလားလို့ပြောလာတယ်။ လုပ်ရမှာတော့ လန့်စရာ ခုံစောင်းမှာ ခြေထောက်တွေကို အမြင့်မှာချိတ် ရင်အုပ်ဘက်က နည်းနည်းနိမ့်ကာ ဆွဲရမှာလေ။ ၄၅ ဒီဂရီအစောင်းလောက်ထင်ရဲ့။ ဒီခုံစောင်းကို သုံးပြီး နည်းနှစ်နည်း လောက်ကစားနိုင်ပါသတဲ့ ကျော်ကျော်ကပြောပြတယ်။ခြေထောက်တွေလျောမကျအောင် အထိန်းမှာသေချာချိတ်ပြီး ရင်အုပ်အတွက် တွန်းတွန်း တင်ရတဲ့ လေ့ကျင့်နည်းတစ်ခုပေါ့နော်။ ဒီလို လေ့ကျင့်ကစားတဲ့နည်းကို ကျွန်တော် နည်းနည်းသိတာကြောင့် လေကြောရှည် မေးမနေတော့ဘဲ ခုံစောင်းနှင့်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပြီး ကျောခင်းကြည့်လိုက်တယ်။
ကျော်ကျော်က အရှေ့ခန်းက မင်းသူကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်ကစားရာမှာ အဆင်ပြေအောင်ကူညီဖို့ပြောတယ်။ ကျော်ကျော် လှမ်းခေါ်လိုက်ချိန်မှာ မင်းသူတစ်ယောက် ရေချိုးဖို့ပြင်နေချိန်ထင်ပါရဲ့ ကျွန်တော်တို့ရှိရာ လှမ်းလာစဉ် ခါးပေါ်မှာ တဘက်ဖြူတစ်ထည် ကို ခပ်ပါးပါးချိတ်ဆွဲလို့။ သူ့လက်အစုံမှာတော့ ခပ်ကြီးကြီး ကပ်ကြေးတစ်လက်ဆွဲကိုင်ထားပါတယ်။ မင်းသူတစ်ကိုယ်လုံးဟာ ကြွက်သားထု သိပ်မကြီးပေမဲ့ သူ့နေရာနှင့်သူ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် အချိုးကျလွန်းပေစွ။ သူ့ဆံပင်တွေက ခွေခွေလိပ်လိပ်နှင့် အဖြောင့် မဟုတ်။ ခါးမှာ တဘက်ကို ခပ်တည်းတည်း ချည်နှောင်ထားတာများ ပြုတ်ကျသွားမလားပဲ။ ကျော်ကျော်နှင့် ကျွန်တော်တို့ရှိနေရာကို ရောက်တော့ သွားစွယ်လေးတွေပေါ်အောင်ပြုံးပြတယ်ဗျ။ gym အတွင်းစီးရတဲ့ဖိနပ်စီးထားတဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်ကိုကြွ သားရေ သိုင်းကြိုးမှာချိတ်၊ နောက်ဖိနပ်တစ်ဖက်ကိုလည်း ချွတ်လိုက်ကာ ထပ်မံချိတ်ဆွဲလိုက်သည်ပေါ့။ ပြီးတော့ ခုံစောင်းပေါ် ကျောပြင်ကို အလျားလိုက်ခင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေဟာ လုံးလုံးလျားလျားကို မြေပြင်ကနေ လွတ်သွားပါတယ်။ တော်သေးတယ် ခြေထောက်တွေကို သိုင်းထားတဲ့ကြိုးက အဆင်ပြေတော့ တစ်ကိုယ်လုံးအောက်ကို လျောမကျဘူး။ မင်းသူက ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကို နေသားတကျဖြစ်အောင်လုပ်ပေး၊ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကို ပြင်ပေးလုပ်ပေးသေးတယ် ခဏတော့။
ကျော်ကျော်က အလေးထည့်ထားတဲ့ဘားတန်းကို တန်းပေါ်အလိုက်သင့်မတင်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘားတန်းကိုကိုင်လိုက်ရော ကျော်ကျော်က သူ့လက်ကြီးတွေနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ထိန်းပေးတော့တာပဲဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အားကိုယ်ဆိုက်ထုတ် တွန်းတင်ခွင့်တော့ပြုပါရဲ့။ နှစ်ကျော့လောက် ကျွန်တော် ကစားပြီးချိန်မှာ သတိထားမိရတာက မြတ်သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဒူးအစုံ ကိုရောက်ရောက်နေတတ်တာပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံကို တစ်ချက် လာလာထိတယ်။
“ဘာလဲဗျ” ကျွန်တော် ခပ်စူးစူး အသံနှင့် သူ့ကိုအော်ရင်းအကြည့် တစ်ချက် ခပ်ပြင်းပြင်းပေးလိုက်တယ်။ အပြုံး….အဲဒီအစွယ်တွေပေါ် အောင်ပြုံးတဲ့အပြုံးကို မင်းသူ ၀တ်ဆင်ထားတုံးပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခါးမှာပတ်ထားတဲ့ တဘက်က လျောကျသွားကာ သူ့ပေါင်ကြားက လောင်ချာကြီးက တန်းနေရော။ ကျွန်တော် ပက်လက်ဖြစ်နေရာကနေ ကုန်းထပြီး ခြေထောက်က သားရေပတ်ကို ဖြုတ်ဖို့ ကြိုးစားလိုက် စဉ်မှာ ကျော်ကျော်က ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်ကို အမြန်ချုပ်ကိုင်ကာ အရင်သတိမပြုမိသေးတဲ့ အလေးဘားတန်းဘေးနားက သားရေသိုင်းကြိုးတွေနှင့် ချည်နှောင်ပစ်တယ်…အ။
မင်းသူ….မင်းသူရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုကြားထဲကနေ အတွင်းက ခံဝတ်ထားတဲ့ jock strap ဆီရောက် လာတယ်။ သောက်ရမ်းဖောင်းတာကြောင့် အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ဟစ်ကြိမ်းမောင်းလိုက်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကျော်ကျော်က တဟဲဟဲဖြင့် အရယ်မပျက်…..အော်လေ ဆက်အော်ချင်သလောက်အော်နိုင်ပါသတဲ့။ ဘယ်သူတစ်ယောက်မှ မကြားနိုင်။ မြတ်သူဘက်ကို စိတ်တိုတို နဲ့ပြန်လှည့်ကြည့်တော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီတိုကိုဆွဲချွတ်နေပါပြီ။ အိုး….ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်အောင် ဆက်မြင်လိုက်ရတာက မြတ်သူလက်မှ ခပ်ကြီးကြီး ကတ်ကြေးတစ်လက်ယူလိုက်တာပါပဲ။
“အလိုက်သင့်နေမလား ဒါမှမဟုတ် မင်းနာချင်သလားပြော” တဲ့ သူကလေသံဟဟဖြင့်ပြောတယ်။ အား….ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီရော gym တွင်းဝတ် ချွေးခံတီရှပ်ရော ကပ်ကြေးနှင့် ညှပ်ချပစ်တယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းလိုလိုပဲ သူ အဲဒီအင်္ကျီတွေဘောင်းဘီ တွေကို ဆွဲဖြဲပစ်တယ်လေ။ ကျွန်တော့် ကျောပြင်ထဲစိမ့်ကနဲဖြစ်အောင် ဖျင်းကနဲဖြစ်သွားတယ်…ကြောက်တာလား ဘာစိတ်လည်းမသိ။ ကျော်ကျော်ကရော ဘာထူးလည်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က ကျန်နေတဲ့ အ၀တ်စတွေ ဘောင်းဘီတွေကို အားပေးအားမြှောက် အကြမ်းပတမ်း အငမ်းမရကို ဆွဲဖြုတ်ဖို့ ကူညီပေးတာ။
“Hmmm….မိုက်တယ်ကွ မင်းသူ…ကြည့် အ၀တ်တွေ ချွတ်လိုက်တော့ ဘော်ဒီက good တယ်” ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကိုဟ အသက်ရှူမိရ ပါပြီ။ မင်းသူက ကျွန်တော့်ငပဲကို ပူနွေးနေတဲ့ သူ့အာခံတွင်းထဲ မျိုချလိုက်တာကိုး။ ထိပ်ပိုင်းကနေ အရင်းအထိ တစ်ခါထဲ တစ်ဆုံးကို သွင်းလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်……ကျွန်တော် ဘာမှမပြောနိုင် ခြေဖျားတွေ တဆတ်ဆတ်ခါမိတဲ့အထိပါပဲဗျာ။
“ဟူး…..ကောင်းလိုက်တာ” ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း မင်းသူကဗလုံးဗထွေးပြောတယ်။ “ငါတို့ ဒီဟာကြီး မာတောင့်နေတုန်း ကောင်းကောင်း အသုံးချကြတာပေါ့ ဟီး” သူ ကျွန်တော့် ဒုတ်ကြီးရဲ့ အရင်းက ဥကို တစ်ချက်လျှာကျွေးပြီးမှ တဖြေး ဖြေးနဲ့ ဆီးပေါက်ဝ ထိပ်ကွဲကြောင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အာခံတွင်းထဲကို ပြန်ပြီးစုပ်မျိုလိုက်ပြန်ရော။ တစ်ဖန် ပါးစပ်ထဲက ပြန်ထုတ်ကာ ကွမ်းသီးခေါင်းအောက်နားက သိုင်းကြိုးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးထိုးကလိပြီး….အား…. ကွမ်းသီးခေါင်း ကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြန်တယ်။ ကျွန်တော် မျက်ဖြူစိုက်မတတ် မိန်းမောရကာ ညည်းညူသံသဲ့သဲ့ ထွက်မိပါရဲ့။ သူ့လက်ချောင်းတွေက ကျွန်တော့် ရွှေဥတွေကို ကယုကယင် ပွတ်သပ်သေးတာပါ။
ကျွန်တော့် ပါးပြင်နားမှာ မာကျောသလို စိုစွတ်နေတဲ့အချောင်း တစ်ခုတို့ထိနေသလို ခံစားရတာကြောင့် ခေါင်းရင်းဘက်ကိုမော့ကြည့်မိ တယ်။ အိုး……ဘုရားသခင် ကြောက်လန့်စရာ ကျော်ကျော်ရဲ့ ကြီးမားလှတဲ့ငပဲကြီးနှင့် လုံးဝန်းနေတဲ့ရွှေဥတွေဟာ ကျွန်တော့်ပါးပြင်နား ကပ်လျက်။ ခပ်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်နေသော ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို သူ့လက်ဝါးကြီးနှစ်ခုနှင့် ညှပ်ကိုင်ကာ သူ့-ီးနဲ့တည့်တည့် ပါးစပ်ကိုထားခိုင်း၊ ပြီးတော့ စုပ်ပြုဖို့ အမိန့်ပေးပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် ဒေါသတကြီးနှင့် ငြင်းဆိုခဲ့တာပါပဲ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေထဲ အောင့်ကနဲနေအောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ မင်းသူက ကျော်ကျော့်အမိန့်ကို ကျွန်တော်ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းအတွက် ကြိတ်ချေ သတိပေး လိုက်ခြင်းပါ။
“သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်စမ်း” မင်းသူက အမိန့်ပေးတယ်ဗျာ။ဒီတော့လည်း ကျွန်တော် ကျော်ကျော့်သဘောရှိပေါ့။ တစ်ချိန်တည်းမှာ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေကိုဆွဲကိုင်ပြီး မမြင်ရတဲ့ မင်းသူရဲ့ သားရေကြိုးတွေ၊ ခုံစောင်းအနိမ့်အမြင့် အလျော့အတင်းတွေလုပ်တာကို ခံစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို ခုံစောင်းအစွန်းကိုဆွဲယူ တင်သားဆိုင်တွေကို တင်ထားတော့တာ။ ၄၅ ဒီဂရီအစောင်း ကနေ ရုတ်တရက် ကြမ်းပြင်နဲ့နီးကပ်သွားတာ ရင်ထဲဟာကနဲဖြစ်သွားရပါတယ်။ နောက်ထပ်ရင်ထဲ ပိုမိုဟာစေတာက ခုံအစွန်းမှာ စွင့်စွင့် ကားကားဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေထဲ တိုးဝင်လာတဲ့ မင်းသူရဲ့ လျှာပူပူနွေးနွေးကြီးဗျ။ အို….အာ…အ သူ…..သူ့ရဲ့ စိုစွတ် နေတဲ့ လျှာဖျားလေးဟာ အကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် ကလိ ကလိတယ်။ ပြီးတော့ အပေါက်ဝလေးကိုလည်း လျှာဖျားလေးနဲ့ ၀န်းဝိုက် လျက် လျက်တာ….ဘယ်လို ခံစားချက်ကြီးလည်းမသိဘူး။ ကျွန်တော့်တင်သားတွေကို ကြုံ့ညှစ်ထားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ သူ့လျှာကြီးက အထဲထိ တိုးတိုးဝင်ဝင် တိုး၍ တိုး၍။ အချိန်တဖြည်းဖြည်းရတော့ ကျွန်တော် တင်းထားတဲ့စိတ်တွေပျော့ တင်သားကိုညှစ်ထားတာတွေ လျော့လိုက်သည်။ ကျွန်တော် အဲ့ဒီဖီလင်ကို ခံစားပျော်ဝင်ပြီပဲ။ ကျွန်တော် ဆက်လက် ငြင်းဆန်ရုန်းကန်နိုင်သားပဲဆိုပေမဲ့ သိနေတယ် ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်ကို စတင်လိုအပ် ခံစားချင်လာတာ။
ကျော်ကျော် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှ ချွတ်ကာ ခုံရဲ့ဘေးကိုရွေ့ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်နားကနေ ကားယားခွလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်နားကို သူ့-ီးကို တိုးကပ် “လျက်စမ်း” တဲ့ အမိန့်ပေးရော။ သူ့ငပဲကြီးရဲ့ထိပ်ပိုင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ဝရောက်ပြန်တော့ လျှာဖျားကိုအသုံးပြု ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်နှင့် ထိပ်အရေပြားကြား ပြေးလွှားရပါတယ်။
“ကျယ်ကျယ်ဟ” သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့ ခပ်ကြီးကြီး ငပဲကြီးကို လည်မျိုထဲထိ တစ်ဆုံးထည့်ပစ်တယ်လေ။
“မရုန်းစမ်းနဲ့” ခပ်တွန့်တွန့်နှင့် သီးတော့မလိုဖြစ်သွားတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုပြောတာများ ရက်စက်ပါ့။ “သက်သောင့်သက်သာနေပြီး ပါးစပ်ကို အလိုက်သင့် ဟထားရင် မင်းကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်မှာပါ။ အတွေ့အကြုံနည်းနည်းတော့ လိုသေးတာ သဘာဝပါပဲကွာ”
သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ကျွန်တော်အထိန်းအပြုတတ်သွားတယ် ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကြီးကိုလေဗျာ။ ခပ်ဖြည်းဖြည်း အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတဲ့ ကျော်ကျော့်ဟန်က တကယ့်မာန်ပါပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်ကြာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ငပဲခေါင်းကို လျက်ပြုတာ၊ ထိပ်ဝလေးကို ကလိတာ လုပ်တတ်သည်အထိ တိုးတက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ဆက်တိုက် အတိုးအ၀င်လုပ်လိုက် လည်မျိုထဲထိ လျောကနဲ လျောကနဲသွင်းလိုက် စည်းချက်ကိုကျလို့။
အ…အ မင်းသူက တော်တော်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ငနဲပဲဗျာ။ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေကို လက်ဝါးနဲ့တဖြန်းဖြန်းရိုက်သလို ကျွန်တော့် ခရေ၀ထဲကို သူ့လက်ချောင်းတွေ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတယ်။ ပထမတော့ လက်ချောင်းတစ်ချောင်း၊ နောက်တော့ နှစ်ချောင်း၊ ပြီးတော့ သုံးချောင်း။ Direct Hit ပဲဗျာ ကျွန်တော့် prostate ကို သူထိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျော်ကျော်က အနေအထားတစ်မျိုးပြောင်းလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ခေါင်းကို ကားယားခွ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲထည့် ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲထည့်တဲ့ 69 အနေအထားနဲ့ စုပ်မျိုပါတယ်….ရွှေဥတွေ….ခရေ၀တွေ….အား…….မြောက်များလှစွာသော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိုးဆွမှုတွေကြောင့် ကျွန်တော် ဘာမှအတွန့်မတတ် စကားမပြောမိတော့ဘဲ မျောပါသွားရပါပြီ။
ကျော်ကျော့်အပြုအစုမှာ မိန်းမောပြီး မျက်ဝန်းတွေကို မှေးမှိတ်မိနေတဲ့ ကျွန်တော် အသက်ကို အငမ်းမရရှူရတဲ့အဖြစ်ကို ကြုံရပါပြီ။ စိုစိစိ အရည်တွေ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို သုတ်လိမ်းခံရာနှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလိုလို မင်းသူ့ငပဲ ရှည်လမျော တရစ်ရစ်နဲ့ တိုးဝင်ထည့်သွင်း လာခြင်းကို ခံစားရတော့တာပါပဲဗျာ။
မင်းသူ သူ့ငပဲရှည်ရှည်ကို တစ်ဆုံးထိုးထည့်ပြီး ဘာမှမလုပ် ခဏတာငြိမ်သက်ကာ အခြေအနေကို သုံးသပ်တယ်။ ပြီးမှ ခပ်ဖြေးဖြေးခြင်း အထုတ်အသွင်းကို အစပျိုးစမ်းသပ်ရော။ အရှိန်ရလာချိန်မှ သူ့အရှိန်ကို မြန်နှုန်းမြှင့်ပါတော့တယ်။ တစ်ချက်ဆို တစ်ချက် အတွင်းထဲက ခလုပ်ကို သွားသွားထိတာကြောင့် ကျွန်တော် ဆီးသွားချင်သလိုလို……အခုပဲ အိမ်သာကိုပြေးချင်သလိုလို ဖြစ်ရတာများ ရာနှုန်းမြှင့်တင်။
အဖြေရလာဒ်ကတော့ ကျွန်တော့်ငပဲသည် အစွမ်းကုန် မာတောင်မှု့ရဲ့အလွန် ကျော်ကျော့်ပါးစပ် အာခံတွင်းထဲသို့ ခပ်ချွဲချွဲအရည်တွေ ပစ်ထည့်လိုက်သည်ပေါ့နော်။ သူ့ပါးစပ်ထဲပြည့်ကာ လျှံကျလာတာများ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပြင်တွေပေါ်တောင် ဖွေးကနဲပါ။ ဗိုက်ပေါ်ကျ နေသော အရာတွေကို ကျော်ကျော်က သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပြီးနောက်မှာ စည်းချက်ကျကျ ကျွန်တော့်ကို-ိုးနေသော မင်းသူရဲ့နောက်ဖက် ကိုရွှေ့ပါတယ်။ ပြီးတော့…သူ…သူ မင်းသူ့တင်သားဆိုင်တွေထဲ သူ့ငပဲကို နစ်မြုပ်စေပါရော။ ခပ်ပြင်းပြင်း စောင့်သွင်းချက်တွေ တရစပ် ပစ်တိုင်း မင်းသူ့ငပဲဟာလည်း ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ လျောကနဲ လျောကနဲ တပြိုင်တည်းလိုလို။ စည်းချက်ညီ သံစဉ်တစ်ပုဒ်လိုပါပဲ သုံး ယောက်သားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ လှုပ်ရှားယိမ်းထိုးနေသပေါ့။
သူတို့နှစ်ယောက်ကိစ္စတစ်ခုရဲ့ အဆုံးသတ်သွားကြချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကို ချုပ်နှောင်မှုတွေ မရှိတော့ လွတ်မြောက်ခွင့်ပေးကာ ရေချိုး ခန်းကိုသွား သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခွင့်ပေးပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေးပြီးမြောက်တော့ အ၀တ်အစားတွေဝတ်ဆင်ကာ Gym မှပြန်ခဲ့လိုက်ပါ တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က ဟာသလုပ်ကာ ရယ်မောနေကြတယ်ဗျာ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု လေ့ကျင့်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြ တာပဲတဲ့ ပြောနေကြသေး။ သူတို့တွေက ဘာအမှားကိစ္စတစ်ခုကိုမျှ မလုပ်ဆောင်ခဲ့သယောင် သရုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘာစိတ်အနှောင့်အယှက်မှ မခံစားရသလိုမျိုး။ ဟင်း….ကျွန်တော် သူတို့နှင့်လိုက်လျောညီထွေ လွင့်မျောခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို စိတ်ဆိုးသွားစေမယ့်အရာတွေကို မလုပ်လိုခြင်းဖြစ်မှာပါ။ မြို့ကြီးရဲ့ ဈေးအသက် သာဆုံး gym ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်။ အသင်းဝင်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေက တန်းစီလို့။ လကုန်လို့ bill စာရွက်ရဲ့ ထိပ် ဒါမှမဟုတ် အောက်ခြေမှာ ခပ်နည်းနည်း ကုန်ကျစရိတ်ကိုသာ ကျွန်တော်မြင်ရခြင်းက သူတို့အတွက် ပြောကောင်းဆိုကောင်းဖြစ်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်လေ။
ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားသက်သက် အစိတ်အပိုင်းလေးသက်သက်ပါလေ။ သုံးညလောက်ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက်မှာ တော့ gym တံခါးဝမှာ ပိတ်ကာနီးအချိန်ကပ်ပြီး ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ချည်နှောင်ဖို့မလို…. ဘာအကြောင်းပြချက်မှ သွေးဆောင်ဖျားယောင်းစရာ မရှိတော့……။
Alex Aung (26 Feb 2013)